“My Secret Romance“ မှာ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ Fan တွေအားလုံးက သဘောတူနေကြတဲ့ Song Ji-eun နဲ့ Sung Hoon တို့ရဲ့ Dating Rumour - MoviesFan
“My Secret Romance“ မှာ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ Fan တွေအားလုံးက သဘောတူနေကြတဲ့ Song Ji-eun နဲ့ Sung Hoon တို့ရဲ့ Dating Rumour
မနေ့ကပဲ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ Dating News ထွက်လာပြီးနောက် ဒီနေ့မှာလဲ နောက်ထပ် သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ Dating News ထပ်ထွက် လာပြန်ပါတယ်။ မနေ့က Park Shin Hey နဲ့ Choi Tae Joon တို့ကတော့ ၁နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ကို Confirm လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့မှာလည်း Song Ji-eun နဲ့ Sung Hoon တို့က ‘My Secret Romance’ Drama ရိုက်ကူးပြီးနောက် Date နေကြပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့အပေါ် Song Ji-eun ကတော့ သူမရဲ့ Instagram မှတစ်ဆင့် ဒီလိုပြောပြထားပါတယ်~
အခုလေးတင်ပဲ သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်.. ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက် fan တွေအကုန်လုံးလည်း အံ့သြနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြသင့်ပြီထင်လို့ Instagram ကနေပဲ အခုလိုပြောလိုက်ရပါတယ်.. “Secret Romance” Drama ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်က romantic drama ဖြစ်တဲ့အလျှောက် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေရော၊ သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးဟာ တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီး အရမ်းကိုရင်းနှီးကြပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Sung Hoon oppa နဲ့လည်း Romantic drama ဖြစ်အောင် drama ရိုက်ကူးချိန်အတွင်း တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီး ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ ရှိနေအောင်လိုအပ်တာမို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်..အခုထွက်ရှိနေတဲ့ သတင်းတွေဟာ မမှန်ကန်ပါဖူး၊ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာလည်း လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာမျိုးလည်း လုံးဝမရှိပါဖူး..
အခုအချိန်မှာ ကျွန်မက သရုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ agency ဖြစ်တဲ့ Stallion Entertainment နဲ့ စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိုပြီးသွားပြီဆိုတာကိုလည်း အသိပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကို မထိခိုက်မနစ်နာစေချင်ပါဖူး။ ကျွန်မရဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အထင်မလွဲ ကြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ နောက်ထပ် သတင်းကောင်းတွေနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။ Fan တွေအနေနဲ့လဲ မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့.. ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ”
ဆိုပြီး IG Post တင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ Dating Rumours ကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။
안녕하세요 이제야 기사를 접했습니다. 팬분들도 참 놀라셨을거란 생각이 듭니다ㅠㅠ 너무 죄송하지만 당분간은 인스타그램으로 얘기를 전해야할 것 같아요😢 애타는 로맨스라는 드라마로 많은 좋은 인연들을 만나 스텝분들과 배우분들 모두 그 인연을 잘 이어나가고 있습니다. 성훈오빠도 그중에 한분인 소중한 인연이자 친한 동료이구요 또 저는 시크릿 활동이 아닌, 연기에 전념하고 싶다는 의사를 그 누구에게도 비친적이 없으며 성훈오빠의 소속사 스탤리온엔터테인먼트와 새로운 계약을 조율 중이라는 소문도 사실이 아닙니다. 더이상 저와 관련없는 분들께 피해를 끼치고싶지 않아요^^; 많은분들이 오해 없으시길 바랄게요 조만간 좋은 소식으로 찾아뵙겠습니다ㅠ 걱정해주시는 팬분들 걱정말구! 좋은하루 보내세요💕
A post shared by SONGJIEUN (@secret_jieunssong) on Jun 13, 2017 at 1:27am PDT
Sung Hoon ရဲ့ agency ကလည်း “ဒီသတင်းကမမှန်ပါဖူး၊ Song Ji-eun က Sung Hoon ရဲ့ ညီမလေးလိုပါပဲ အဲ့ဒီထက်မပိုပါဖူး၊ ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေလိုမျိုး တစ်ခါတစ်ရံ စကားပြောတွ့ဆုံတာလေးတွေရှိပေမယ့် အဲ့ဒါထက်မပိုပါဖူးလို့” ပြောပြထားပါတယ်။
Sung Hoon ကတော့ Dating News နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ IG မှာ တစ်စုံတစ်ရာပြောထားတာမျိုးတော့ မရှိသေးပါဖူး။
ကဲ “My Secret Romance” မှာလည်း အသေရိုခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် အပြင်မှာရော Secret Romance ဆိုတဲ့အတိုင်း Secret Romance ကြတာလားဘာလားဆိုတာတော့ Admin လည်းမသိပါဖူးလို့ 😝
သူတို့နှစ်ယောက်ကို သဘောတူကြတဲ့သူတွေရောရှိလား Fan Fan တို့? 😆
A post shared by SONGJIEUN (@secret_jieunssong) on Jun 12, 2017 at 3:19am PDT
A post shared by SONGJIEUN (@secret_jieunssong) on May 30, 2017 at 8:26am PDT
A post shared by SONGJIEUN (@secret_jieunssong) on May 13, 2017 at 5:50am PDT
A post shared by SONGJIEUN (@secret_jieunssong) on Apr 17, 2017 at 6:03am PDT
A post shared by Sunghoon&Roiii (@sunghoon1983) on Apr 17, 2017 at 5:01am PDT
Shwe Yi	No Comments
Previous Post: ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် ‘Be With You’ ဆိုတဲ့ Drama အသစ်လေးအကြောင်း
Next Post: Agency အသီးသီးက Confirm လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Lee Dong Wook နဲ့ Suzy တို့ရဲ့ Dating News